LGBT တွေကို ခွန်အားဖြစ်စေမယ့် နာမည်ကြီး အနုပညာရှင် (၇) ဦးရဲ့ စကားများ - For her Myanmar
ဇွန်လဆိုတာက LGBT တွေ အတွက် ထူးထူးခြားခြား လပါ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ၁၉၆၉ ခုနှစ်က Manhattan မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Stonewall အဓိကရုဏ်းကနေ စခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမယ်။ ဒီအဓိကရုဏ်းကြောင့်ပဲ အမေရိကန်တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ LGBT တွေရဲ့ လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့် လှုပ်ရှားမှုက အထွတ်အထိပ် ရောက်ခဲ့တာပါ။ LGBT အဖွဲ့အစည်းအတွက် တော်လှန်မှု အကြီးစားကို ဇွန်လမှာ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်လို့ ဇွန်လကို Pride Month လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ကြတာပါ ယောင်းတို့ရေ…
LGBT အဖွဲ့အစည်းတွေ တန်းတူညီမျှ လူ့အခွင့်အရေး ရဖို့အတွက် ထောက်ခံအားပေးသူတွေထဲမှာ ဒီအနုပညာရှင်တွေကလည်း တစ်တပ်တစ်အားပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ LGBT နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူတို့တွေရဲ့ ခံယူချက်တွေကတော့…
“လူတွေအပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်မယ့် တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းက တစ်ဦးပေါ် တစ်ဦး အကြင်နာ မေတ္တာထားရှိခြင်းပါပဲ။ လူတွေကို အယူအဆသစ်တွေ ရိုက်သွင်းတာမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့် ရှိစေချင်တယ်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ကိုယ့်ရင်ထဲက အသံကို နားထောင်တတ်ရမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို အရှိအတိုင်း လက်ခံလိုက်ပါ။”
“မိန်းမဆန်ဆန် နေရမယ်ဆိုတဲ့ ဖိအားတွေအောက်မှာ ကျွန်မ နေခဲ့ဖူးတယ်။ မိန်းကလေးမို့လို့ ဂါဝန် စကတ်လေးတွေ ဝတ်တတ်ရမယ်။ အဲ့လိုမှ မဟုတ်ရင် လူတွေက ယောက်ျားလျာ လို့ ထင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေအောက်မှာ ပိတ်မိခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခုတော့ ကျွန်မအတွက် အဆင်ပြေနိုင်မယ့် ဘယ်အဝတ်အစားမဆို ကျွန်မ ဝတ်တယ်၊ အဲလို ဝတ်ခြင်းကနေလည်း လွတ်လပ်မှုကို ကျွန်မ ခံစားရတယ် ”
Related Article>>> ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် LGBT ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ကြတဲ့ နာမည်ကျော် ဆယ်လီဘရစ်တီ (၈)ဦး
“လူတွေ ပြောနေကြတဲ့ Gay ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော်က စိတ်တောင်မဝင်စားဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် gay မှန်း သိခဲ့တာ ကြာပြီဖြစ်သလို (၁၀) နှစ်သားမှာ ကျွန်တော် ဒါကို ထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းမှာ သူငယ်ချင်းတွေက ‘မင်း gay လား’ လို့ မေးတိုင်း ကျွန်တော်က ‘ဟုတ်တယ်’ ပဲ ပြန်ဖြေတယ်။”
“ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ဆန္ဒအတိုင်း ဖြစ်နိုင်ခွင့်က လူတိုင်းမှာ ရှိတာမို့ ဒါကို အထူးအဆန်း လုပ်နေစရာ မလိုဘူးလို့ ထင်တယ်” “ခင်ဗျားက လူဖြူဖြစ်စေ၊ လူမည်းဖြစ်စေ၊ Gay ဖြစ်စေ၊ Straight ဖြစ်စေ၊ Transgender ဖြစ်စေ၊ ဘယ်လိုလူမျိုးပဲ ဖြစ်နေပါစေ၊ ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကို သေလောက်အောင်ချစ်တယ်”
“အချစ်ဆိုတာ အရောင်အသွေး၊ ပုံသဏ္ဍာန်၊ အရွယ်အစား အမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လေ။ ရှင်တို့သည် Straight ပဲ ဖြစ်စေ၊ LGBT ပဲဖြစ်စေ၊ ရှင့်ရင်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အချစ်ဟာ စစ်မှန်ခိုင်မာပြီး အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ လက်ဆောင်ကောင်းတစ်ခုပါပဲ”
“ကျွန်မ ဘဝ တစ်ခုလုံးမှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အထီးလား အမလား ဆိုတာကိုတောင် သေချာ နားမလည်သေးဘူး။ ကျွန်မ လက်တွဲဖော်လည်း ဒါတွေ နားလည်စရာ မလိုပါဘူး။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် နာကျင်အောင် မလုပ်နေသမျှ ကိုယ့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုပါပဲ။ ကိုယ့်အရှိအတိုင်း လက်ခံပါ”
7. Christine Stewart
“ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဘောင်တွေထဲက အရင်ရုန်းထွက်ပါ။ မင်းသမီးတစ်ယောက် ဆိုပေမဲ့ lesbian ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို ပြောပြပြီးတဲ့နောက် ပိုပြီး နေသာထိုင်သာ ရှိပါတယ်။ နောက် သုံးနှစ် လေးနှစ်လောက်နေရင် gay လား straight လား စဉ်းစားနေသူတွေ သိပ်ရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ ကိုယ့်ပုံစံအတိုင်းပဲ ကိုယ်ဆက်သွားပါ။”
References: instyle , Pink News , Seventeen , Pinterest
သူလညျးလူ၊ ကိုယျလညျးလူမို့ ဘာအားငယျစရာ ရှိမှာလဲ!!!
ဇှနျလဆိုတာက LGBT တှေ အတှကျ ထူးထူးခွားခွား လပါ။ ပွောရမယျဆိုရငျ ၁၉၆၉ ခုနှဈက Manhattan မှာ ဖွဈခဲ့တဲ့ Stonewall အဓိကရုဏျးကနေ စခဲ့တယျလို့ ဆိုရမယျ။ ဒီအဓိကရုဏျးကွောငျ့ပဲ အမရေိကနျတဈနိုငျငံလုံးမှာ LGBT တှရေဲ့ လှတျလပျပိုငျခှငျ့ လှုပျရှားမှုက အထှတျအထိပျ ရောကျခဲ့တာပါ။ LGBT အဖှဲ့အစညျးအတှကျ တျောလှနျမှု အကွီးစားကို ဇှနျလမှာ ပွုလုပျနိုငျခဲ့တာဖွဈလို့ ဇှနျလကို Pride Month လို့ သတျမှတျခဲ့ကွတာပါ ယောငျးတို့ရေ…
LGBT အဖှဲ့အစညျးတှေ တနျးတူညီမြှ လူ့အခှငျ့အရေး ရဖို့အတှကျ ထောကျခံအားပေးသူတှထေဲမှာ ဒီအနုပညာရှငျတှကေလညျး တဈတပျတဈအားပါဝငျခဲ့ကွပါတယျ။ LGBT နဲ့ ပတျသကျပွီး သူတို့တှရေဲ့ ခံယူခကျြတှကေတော့…
Related Article >>> အမရေိကနျပွညျထောငျစုရဲ့ သမိုငျးထဲက LGBTတိုကျပှဲရှညျ အကွောငျး တစတေ့စောငျး
“လူတှအေပျေါ လှမျးမိုးနိုငျမယျ့ တဈခုတညျးသော နညျးလမျးက တဈဦးပျေါ တဈဦး အကွငျနာ မတ်ေတာထားရှိခွငျးပါပဲ။ လူတှကေို အယူအဆသဈတှေ ရိုကျသှငျးတာမြိုးတော့ မဟုတျဘူး။ ဒါပမေဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ဘဝမှာ ကိုယျပိုငျလှတျလပျခှငျ့ ရှိစခေငျြတယျ။ အရေးအကွီးဆုံးကတော့ ကိုယျ့ရငျထဲက အသံကို နားထောငျတတျရမယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ ဖွဈတညျမှုကို အရှိအတိုငျး လကျခံလိုကျပါ။”
“မိနျးမဆနျဆနျ နရေမယျဆိုတဲ့ ဖိအားတှအေောကျမှာ ကြှနျမ နခေဲ့ဖူးတယျ။ မိနျးကလေးမို့လို့ ဂါဝနျ စကတျလေးတှေ ဝတျတတျရမယျ။ အဲ့လိုမှ မဟုတျရငျ လူတှကေ ယောကျြားလြာ လို့ ထငျလိမျ့မယျဆိုတဲ့ အတှေးအချေါတှအေောကျမှာ ပိတျမိခဲ့ဖူးတယျ။ ဒါပမေဲ့ ခုတော့ ကြှနျမအတှကျ အဆငျပွနေိုငျမယျ့ ဘယျအဝတျအစားမဆို ကြှနျမ ဝတျတယျ၊ အဲလို ဝတျခွငျးကနလေညျး လှတျလပျမှုကို ကြှနျမ ခံစားရတယျ ”
Related Article>>> ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ LGBT ဖွဈကွောငျး ကွညောခဲ့ကွတဲ့ နာမညျကြျော ဆယျလီဘရဈတီ (၈)ဦး
“လူတှေ ပွောနကွေတဲ့ Gay ဆိုတာနဲ့ ပတျသကျလို့ ကြှနျတျောက စိတျတောငျမဝငျစားဘူး။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ gay မှနျး သိခဲ့တာ ကွာပွီဖွဈသလို (၁၀) နှဈသားမှာ ကြှနျတျော ဒါကို ထုတျဖျောခဲ့ပါတယျ။ ကြောငျးမှာ သူငယျခငျြးတှကေ ‘မငျး gay လား’ လို့ မေးတိုငျး ကြှနျတျောက ‘ဟုတျတယျ’ ပဲ ပွနျဖွတေယျ။”
“ကိုယျ့ရဲ့ စိတျဆန်ဒအတိုငျး ဖွဈနိုငျခှငျ့က လူတိုငျးမှာ ရှိတာမို့ ဒါကို အထူးအဆနျး လုပျနစေရာ မလိုဘူးလို့ ထငျတယျ” “ခငျဗြားက လူဖွူဖွဈစေ၊ လူမညျးဖွဈစေ၊ Gay ဖွဈစေ၊ Straight ဖွဈစေ၊ Transgender ဖွဈစေ၊ ဘယျလိုလူမြိုးပဲ ဖွဈနပေါစေ၊ ကြှနျတျောခငျဗြားတို့ကို သလေောကျအောငျခဈြတယျ”
“အခဈြဆိုတာ အရောငျအသှေး၊ ပုံသဏ်ဍာနျ၊ အရှယျအစား အမြိုးမြိုးကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာနိုငျတယျလေ။ ရှငျတို့သညျ Straight ပဲ ဖွဈစေ၊ LGBT ပဲဖွဈစေ၊ ရှငျ့ရငျထဲမှာ ဖွဈပျေါလာတဲ့ အခဈြဟာ စဈမှနျခိုငျမာပွီး အဖိုးမဖွတျနိုငျတဲ့ လကျဆောငျကောငျးတဈခုပါပဲ”
“ကြှနျမ ဘဝ တဈခုလုံးမှာ ကိုယျကိုယျတိုငျ အထီးလား အမလား ဆိုတာကိုတောငျ သခြော နားမလညျသေးဘူး။ ကြှနျမ လကျတှဲဖျောလညျး ဒါတှေ နားလညျစရာ မလိုပါဘူး။ တဈယောကျကို တဈယောကျ နာကငျြအောငျ မလုပျနသေမြှ ကိုယျ့ရဲ့ ရှေးခယျြမှုဟာ ကိုယျ့ရဲ့ ရှေးခယျြမှုပါပဲ။ ကိုယျ့အရှိအတိုငျး လကျခံပါ”
“ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အဓိပ်ပာယျသတျမှတျခငျြတယျဆိုရငျ ဘောငျတှထေဲက အရငျရုနျးထှကျပါ။ မငျးသမီးတဈယောကျ ဆိုပမေဲ့ lesbian ဖွဈတယျ ဆိုတာကို ပွောပွပွီးတဲ့နောကျ ပိုပွီး နသောထိုငျသာ ရှိပါတယျ။ နောကျ သုံးနှဈ လေးနှဈလောကျနရေငျ gay လား straight လား စဉျးစားနသေူတှေ သိပျရှိတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒီတော့ ကိုယျ့ပုံစံအတိုငျးပဲ ကိုယျဆကျသှားပါ။”
Tags: cele, celebrate, Celebrity news, Famous, inspiring, Pride Month, Quotes